OTU ESI ACHỌTA IHE DIAGONAL NKE LAPTỌỌPỤ GỊ - WINDOWS - 2019
Uzo esi amata ihe ngosi nke laptọọpụ laptọọpụ
CPU-Z bụ ngwa na-ewu ewu nke na-egosiputa ozi nhazi banyere "obi" nke kọmputa ọ bụla - ya nhazi. Ntuzi freeware a ga - enyere gị aka ịchekwa ngwaike gị na PC ma ọ bụ laptọọpụ gị. N'okpuru ebe a anyị na-ele anya na ohere ndị CPU-Z na-enye.
Hụkwa: Mmemme maka nchọpụta PC
Ozi CPU na motherboard
Na mpaghara "CPU" ị ga-achọta ozi gbasara ihe nlereanya na aha koodu nhazi, ụdị njikọ, ọsọ elekere, na ugboro ugboro. Window ngwa na-egosiputa ọnụ ọgụgụ nke cores na eri maka nhazi ahụ. Ihe nchekwa nchekwa cache dịkwa.
Ozi nnabata nwere aha nlereanya, chipset, ụdị nke akwa ndịda, version BIOS.
Ozi RAM na ihe osise
Na taabụ ndị RAM, ị nwere ike ịchọpụta ụdị ncheta, olu ya, ọnụ ọgụgụ nke ọwa, tebụl oge.
CPU-Z na-egosiputa ozi gbasara ndị nhazi ihe nkiri - ihe nlereanya ya, ebe nchekwa, ugboro.
Na CPU-Z, ị nwere ike ịnwale otu nhazi na multiprocessor. A na-anwale nhazi ahụ maka arụmọrụ na nkwụsi ike nrụgide.
Enwere ike ịbanye na kọntaktị CPU-Z iji kọwaa ọrụ ya na nhazi ndị ọzọ na họrọ ihe ngwaike kwesịrị ekwesị.
- Ọdịdị nke nsụgharị Russian
- Ngwa nwere ohere ịnweta
- Ntụle dị mfe
- Ike iji nwalee onye nhazi
- Enweghị ike ịnwale components ndị ọzọ nke PC, ma e wezụga maka processor.
Usoro ihe omume CPU-Z dị mfe na unobtrusive. Na ya, ị nwere ike ịchọpụta ozi kachasị ọhụrụ banyere components nke PC gị.
Download CPU-Z maka n'efu
HWiNFO SIV (Onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka usoro ihe ọmụma) Otu esi eji CPU-Z FAST Defrag Freeware
CPU-Z bụ usoro bara uru iji nweta nkọwa zuru ezu banyere components ndị arụnyere na kọmputa: motherboard, processor, memory.
Onye Mmepụta: CPUID